by URichard Hickey, umlawuli we-Peterson's and Essay Edge
Ulungele utshintsho. Mhlawumbi ixesha otyalomali kulo msebenzi wakho wangoku liye labonakala lincinci kunelokho owawulindele ngaphambili. Mhlawumbi iimfuno zakho zitshintshile, okanye ufuna ukufumana imali eninzi . Kungakhathaliseki ukuba zeziphi iimeko zakho, uyazi ukuba ufuna ukubuyela esikolweni ngenqanaba elitsha (okanye lakho lokuqala).
Ukulungelelanisa ukukhululeka esikolweni kuya kuba nzima, ngakumbi ekubeni izinto ezininzi zitshintshile ukususela ekubeni usencinane. Oku kuyinyani ngokukodwa xa ujongene novavanyo lokuqala (umThetho okanye i-SAT). Iingcebiso ezisibhozo ezingezantsi zingakunceda ujikeleze ihlabathi le-prep test, kwaye uncede wenze isigqibo sokuba yeyiphi uvavanyo oza kuthatha ukuze ukwazi ukwenza umsebenzi wakho.
Yazi ukuba yiliphi Uvavanyo olufunekayo ukuthatha
UMTHETHO ufumene ekuthandeni ngaphezu kweminyaka, kwaye i-SAT iqhuba utshintsho olukhulu. Ngaphambi kokuba ubhalisele enye, qiniseka ukuba amanqaku akho aya kwamkelwa kwiikholeji ozifaka kuzo. Ngokuqinisekileyo awufuni ukuthatha umThetho uze ufumane i-SAT yolu vavanyo olufunekayo lwesikolo sakho! Ukuba awukwazi ukufumana ulwazi kwiwebhusayithi yesikolo sakho, fownela okanye wenze i-aphoyintimenti kunye nomcebisi.
Qaphela ukuba izikolo zakho zangaphambili zifumaneka kwaye zichanekile
Imicimbi ye-ACT kunye ne-SAT igcina amanqaku amaninzi ebuyela emva kweminyaka emininzi, ngoko ke ukuba ungenayo irekhodi yamanqaku akho angaphambili, qhagamshelana nenkampani yokuvavanya ikopi. Ukuba uneminyaka engama-30 ubudala, okanye ngaphezulu, umlinganiselo wakho wokuvavanya ngo-17 mhlawumbi awuyiyona ngongoma engcono kakhulu yokusebenza kwengqondo yakho yangoku, ukuze ukwazi, kwaye mhlawumbi kufuneka, ufumane ukuvavanya. UMSEBENZI izikolo, umzekelo, ziyiminyaka emihlanu kuphela.
Yazi Ixesha lokuLawulwa kweeNkcukacha zeSikolo sakho soKhetho
Unako ukukhawuleza ingxelo yakho yamanqaku ngemali, kodwa kulungile ukuba uqinisekise ukuba amanqaku akho aya kuthunyelwa kwiikholeji ozikhethile kunye nexesha elide lokulondoloza. Akukho nto embi ngaphezu kokuzama ukukhawuleza ukuvavanya kwakho (nokufunda ixesha) ngethemba lokuba ufike kwiikholeji ngexesha. Kutheni ukongeza kwixinzelelo lwakho?
Brigitte Sporrer - Cultura - Getty Izithombe 155291948
Qinisekisa ukuba uyazi apho isikhungo sovavanyo. Iimvavanyo ezininzi ze-ACT kunye ne-SAT zilawulwa kwiikholeji zasekuhlaleni. Emva koko, bhalisa kwangaphambili, unike ixesha elininzi lokufunda, kwaye unike inkampani yokuvavanya ixesha elininzi lokufumana izikolo zakho kwiikholeji yakho. Kulula kakhulu le mihla ukubhalisa kuMTHETHO okanye kwi-SAT ngenxa yokucwangciswa kwe-intanethi.
Isifundo, Isifundo, Isifundo
Romilly Lockyer - I-Bank Image - Getty Izithombe 10165801
Kukho iinketho ezininzi kunanini ngaphambili ukuze kukuncedise ukulungiselela, kubandakanywa izifundo ezininzi zokufunda kwi-intanethi, iincwadi kunye namaCD asebenzayo. Zilungile kuphela xa uzisebenzisa, nangona kunjalo, ngoko uhlakaniphe malunga nexesha lakho lokuzikhethela, kwaye qinisekisa ukuba unike amandla okufuneka ukuba ufumane amanqaku ofuna. Ukuba unenkcitho enzima kunye necandelo elinye, qiniseka ukuba ugxininise kuloo nto, kodwa ungayinaki into oyenzayo. Ukufunda, ukufunda, ukufunda !
Yazi Xa iimvavanyo zijongelwe ukutshintsha
UVincent Hazat - I-PhotoAlto Agency I-RF Iqoqo - Getty Images pha202000005
UMTHETHO kunye ne-SAT baye bahlala befana kakhulu kule minyaka, kodwa kuncinci kuncinci, kwaye kuninzi kunokwenzeka, utshintsho kubo ofuna ukuyiqonda. Ngokomzekelo, ngo-2016, i-SAT iqhutyelwa inguqu enkulu kwixesha elide (akukho manqaku alahlekelwayo ekufumaneni imibuzo engalunganga, ukucaciswa kwamagama amaninzi kuvavanyo, njl.). Kubalulekile ukuba ufunde uvavanyo oya kunikwa. Qinisekisa ukuba izixhobo zakho zokufunda zisesikolweni. Awufuni ukucwangcisa ngesikhokelo sokudala sonyaka we-2016 vavanyo!
Sebenzisa zonke izixhobo ezikhoyo
I-TV - uPaul Bradbury - OJO Izithombe - Getty Izithombe 137087627
Unokumangaliswa ukufumanisa ukuba ikholeji yakho yokukhetha inikezela ngezixhobo ezikhethekileyo kuwe njengomntu omdala ebuyela esikolweni. Uninzi lwezibonelelo zibandakanya i-prep test kuba iikholeji ziyazi ukuba iimeko zakho zihluke kakhulu nezo zikolo eziphakamileyo zezikolo.
Kukho kwakhona ukusetyenziswa kweeklasi ezivulekileyo, ngokukodwa ukuba awuzange usebenzise i-algebra okanye ubhale incoko ngeminyaka. Ezinye zeeyunivesithi eziphezulu kwihlabathi, njengeMIT neYale, zinikela ngeeklasi ezithengiyo zekhredithi mahhala. Abanye bafuna ukubhaliswa, ngelixa ezinye zifumaneka ngokulula kwi-intanethi kwiziko ezifana ne-YouTube.
I-Pros and Conserve ye-MOOC
8 Iindawo zokufumana iiVideos zeMfundo zamahhala
Khumbulani Amandla Akho
Izithombe zeMorsa - Umbono weDividal - Getty Izithombe 475967877
Mhlawumbi uphakanyisiwe ngesiNgesi ngenxa yokuba uthanda ukufunda njengengane, kodwa ubuya esikolweni kwizinga lokuphendula ngenxa yokuba ufumene itoni yezemidlalo kwiindawo zokusebenza kwaye ufumene uyayithanda. Lezo zakhono zokufunda nezokubhala zikhona, ukuba kungenjalo. I-oyile baze bafumane ezo zixhobo zengqondo ziphinde zisebenze, kwaye unokwenza okulungileyo kokubili ukuqonda nokubhala. Kungakhathaliseki ukuba amandla akho kunye nobuthathaka, ukufundisisa ngokuhlakanipha kungenza umehluko omkhulu kumanqaku akho okugqibela.
Ukuba ubuya esikolweni ngesidanga esiphumeleleyo, uya kufumana ulwazi malunga nokuhlolwa kokungena kweli nqaku: Uvavanyo lweMviwo olufunekayo ukuya esikolweni
Qinisekisa ukujonga isayithi likaKelly Roell ngolwazi olongezelelweyo kwi-prep test: malunga noPhulo loVavanyo
Fumana uluhlu lwawo onke amanqaku ngumbhali odumileyo ongumvakalisi uRyan Hickey kwiphepha lakhe le-bio: Ryan Hickey Bio
Nika abantu abathethayo
Ukunyusa? Plumbing? Funda uRhwebo, Khangela umsebenzi
Inani elincinci elincinci leMathathu Inani lama-80s
Iseluleko samahhala apho Umbala wePaint yangaphandle ukukhetha
Bien dans Sa Peau - Inkcazo yesiFrentshi ichazwa
Amathuba okuNkokheli kwiKholeji
Impawu zoBalulekileyo zaseJapan kunye nendlela yokwenza ngokufanelekileyo